တယ်လီနော သုံးနှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အသက်သာဆုံးသော ဈေးနှုန်းနှင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်မည်? - Yangon Media Group
တယ်လီနော သုံးနှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အသက်သာဆုံးသော ဈေးနှုန်းနှင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်မည်?
တယ်လီနောမြန်မာသည် ယနေ့တွင် ကုမ္ပဏီ၏ သုံးနှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် အသုံးပြုသူများနှင့် အတူတကွ ဆင်နွှဲနိုင်ရန်အတွက် ဈေးနှုန်းအသက်သာဆုံး တယ်လီနော အချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ဝန်ဆောင်မှု တစ်ရပ် ဖြစ်သည့် “တယ်လီနော သာသာယာယာ” အား နောက်ထပ်အဓိက ခြေလှမ်းတစ်ရပ်အဖြစ် မိတ်ဆက် လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“တယ်လီနော သာသာယာယာ” အစီအစဉ်အား သုံးစွဲခြင်းဖြင့် အသုံးပြုသူများအနေနှင့် တယ်လီနောအချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခ တစ်မိနစ်လျှင် ၁၀ ကျပ်သာ ကျသင့်မည် ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ အစီအစဉ်သစ်အား လွယ်ကူစွာ ရယူ အသုံးပြု နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ တယ်လီနော အသုံးပြုသူများသည် အဆိုပါ အစီအစဉ်အား အသုံးပြုရန်အတွက် *979*10# ကိုသာ ခေါ်ဆိုရန်လိုအပ်ပြီး ယင်းသို့ ခေါ်ဆိုပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက်ချက်ချင်း စတင်အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ဒေတာအသုံးပြုသူများအနေနှင့် ၁ မဂ္ဂါဘိုက်လျှင် အနည်းဆုံး ၁.၂၅ ကျပ်အထိသာ ကျသင့်မည့် “ဒေတာစုဘူး” အစီအစဉ်အား အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး ပေးချေရသည့် ကျသင့်ငွေနှင့် ထိုက်တန်သည့် ဝန်ဆောင်မှုအား ပြန်လည် ရရှိလိုသော၊ ကိုယ်ပိုင် ငွေကြေးသုံးစွဲမှုများအား အလုံးစုံ စီမံခန့်ခွဲလိုသော အသုံးပြုသူများ၏ စိတ်ကြိုက် အစီအစဉ် တစ်ရပ် အဖြစ် ဆက်လက် တည်ရှိ သွားမည် ဖြစ်သည်။
တယ်လီနောသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူဦးရေ စုစုပေါင်း၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းအား လွှမ်းခြုံထားပြီး ဆက်သွယ်ရေး တာဝါတိုင်ပေါင်း ၈,၀၀၀ နှင့်အတူ တယ်လီနောသည် လက်ရှိတွင် နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ပြည်နယ်အားလုံးနှင့် မြို့နယ်အများစုအား ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်လျက် ရှိသည်။
ဂျေလိဂ်ကလပ် ဆီရီဇိုအိုဆာကာ အသင်းပို့ချပေးမည့် ဘောလုံးသင်တန်းကို ဂျပန် အားကစားဒုဝန်ကြီး တက
လူသားနဲ့တိရစ္ဆာန်တို့ကြားက ဆက်ဆံရေးအကြောင်း ဖော်ပြမယ့်အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်လာမယ့် ပတ်ရှင်ဟေး